अभिनेत्री निरुता सिंह भन्छिन् मनमा घण्टी बजाउने केटाको पर्खाइमा छु…..[हेर्नुहोस पुरा विवरण] – News Kalika
एक समय नेपालका रोना धोनावाला फिल्मको पर्यायजस्तै थिइन्, अभिनेत्री निरुता सिंह। फिल्म दक्षिणा बाट नेपाली सिनेमामा प्रवेश गरेकी उनले त्यसपछिको एक दशक यस्तै भूमिकामा एकछत्र राज गरिन्। उनले अभिनय गरेका आफ्नो मान्छे दर्पण छायाँ ठूल्दाइ लगायत फिल्म हिट छन्। फिल्म फर्की आऊ पछि भारतको मुम्बई हानिएकी निरुता सात वर्षपछि फिल्म नाइँ नभन्नू ल ५ बाट फेरि पर्दामा फर्किइन्। सामीप्यराज तिमल्सेना र सृजना खड्काले सम्पूर्ण साप्ताहिकको लागि लिएको खुलस्त संवाद ।
फिल्मको सुटिङ हेरेको भरमा निर्देशक हुन्थे। एकदुई पैसा जोरजम्मा हुनेबित्तिकै निर्माता। नयाँ निर्माता, निर्देशक आउनुुलाई मैले नराम्रो मानेको होइन। यो ठाउँमा काम सिकेर आउनुपर्छ भन्ने मेरो धारणा थियो। तर, काम नसिकी आउँदा हामीलाई अप्ठ्यारो प¥यो। मलाई त्यो वातावरण पटक्कै राम्रो लागेन।
पूरै फिल्ममा कहिले हेर्न पाइन्छ ? भन्नुभयो। मेरो इन्स्टाग्राम र फेसबुकको म्यासेज बक्स यस्तै प्रश्नहरूले भरिएका छन्। यिनै कुराले मलाई फिल्ममा कमब्याक गर्न घच्घच्यायो। जस्तो पायो त्यस्तो फिल्म गर्दिनँ भन्ने थियो। केही समयअघि किरण केसी दाइको फोन आयो।
भारतीय फिल्म मम हेलिकप्टर इला इंग्लिस विंग्लिस टाइपको फिल्म आयो भने गर्छु। समयसँगै तपाईंको रोलमा पनि सिफ्ट आयो है। टप हिरोइन हुँदाहुँदै अहिले आमाको भूमिका गर्नुपरेको छ। मानसिक रूपमा आफूलाई त्यो चिजमा ढाल्न कत्तिको गाह्रो वा सजिलो भयो ? यो कुरामा कन्भिन्स्ड हुन मलाई पटक्कै गाह्रो भएन।
त्यो बेला मार्केट नै थिएन। बजेट कम हुन्थ्यो। ३०–३५ लाखमा फिल्म बन्थ्यो। ६० लाख कटेको फिल्मलाई जिब्रो टोकिन्थ्यो। टेक्नोलोजी पनि खासै एड्भान्स थिएन। क्यामेरा म्यानले हेरेर ओके भनेको भरमा सुटिङ हुन्थ्यो। अहिले त डिजिटलाइज भइसक्यो। आफ्नो सट मन परेन भने फेरि टेक लिन मिल्छ। मार्केटमा आएपछि हिन्दी फिल्म हो कि नेपाली चिन्नै मुस्किल परिसक्यो।
मेरो दुई जना दिदी, एक जना दाइ अनि म हो। म चाहिँ कान्छी छोरी। सबैले मलाई एकदमै माया गर्छन्। उनीहरूले मलाई आफ्नो बच्चाजस्तै गर्छन्। उनीहरूसँग हरेक दिन फोनमा कुरा भइरहन्छ। मैले खाए÷खाएन, सञ्चो-बिसञ्चो सोधिरहन्छन्। उनीहरूलाई आफ्नो छोराछोरीको भन्दा मेरो बढी चिन्ता लाग्छ।
Previous Postयी युवतीले यसरि सारी लगाएर पानीमा लपक्कै भिज्दै गरेका तस्विर सामाजिक सञ्जालमा भाईरल…..(हेर्नुहोस् तस्बिर सहित)
Next Post३० वर्ष काटेपछि महिलाले अनिवार्य गराउनुपर्ने यी ५ परीक्षण : सबै महिलाले पढ्नुहोला,पुरुषहरुले शेयर गर्दिनुहोला
नायिका सुरविना कार्की यस्तो अवतार मा हेर्नुहोस् मोहित पार्ने रूप, फिदा बनाउने फिगर १५ फोटोमा
kalika 3:38 pm
यी ५ नायिकाः जसका फिल्म फ्लप छन्, तर अाफु सुपरहिट छन् ,
kalika 11:50 am
ब्युटिफुल नायिका अदिति बुढाथोकीले सार्बजनिक गरिन यस्ता तस्बिर। मोहित पार्ने रूप, फिदा बनाउने सुन्दरता…..(३० तस्बिर सहित)
kalika 4:05 pm